NEWS Archives - Page 11 of 13 - SANTHITSA
“ကျောင်း” ဆိုတာ နေ့ကလေးထိန်းဌာနလား
“ကျောင်း” ဆိုတာ နေ့ကလေးထိန်းဌာနလား ပညာရေးဌာနက စာသင်နှစ်တစ်နှစ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလဆုံးရင် စာမေးပွဲစစ်ပြီး ကျောင်းပိတ်နေတာကို နောက်နှစ်တွေကစပြီး မတ်လကုန်အထိ ကျောင်းတက်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စား အားလုံးလည်း စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါ့။ မတ်လဆိုတာ အလွန်ပူလောင်တဲ့ လတစ်လ။ တစ်လလုံး ကျောင်းပိုတက်ရမယ့်ကိစ္စ ပူပူလောင်လောင်ရာသီမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ အဲကွန်းခန်းထဲက ပညာရေးတာဝန်ရှိလူကြီးတွေ အမိန့်ထိုင်ထုတ် နေတာ အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ်ဆိုပြီး စောင့်မျှော်နေခဲ့ပါတယ်။ မြို့ပေါ်က အဲကွန်းတပ်ထားတဲ့ စာသင်ခန်းတွေဆီ စစ်ဆေးရေးဆင်းပြီး ဧပြီလလောက်အထိလည်း အေးအေး ဆေးဆေးစာသင်နိုင်တာပဲလို့ ဆုံးဖြတ်တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်း မျှော်လင့်ရသပေါ့။ ဒီမနက်တော့ သတင်းစာကောက်ဖတ်လိုက်မှ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မတ်လအထိ ကျောင်းတက်ခိုင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက် သိလိုက်ရသဗျ။ ဘာတဲ့ “ကျောင်းပိတ်ချိန်တွင် မိဘများ အဆင်မပြေသဖြင့် …
နီပေါနိုင်ငံ လုဗ္မနီမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့ ရုပ်တုကို ထားမည်..
နီပေါနိုင်ငံ လုဗ္မနီမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့ ရုပ်တုကို ထားမည်.. ရုပ် တု ဖွင့် ပွဲ အ ခမ်း အ နား ကို မေ လ ၁၇ ရက် နေ့ မှာ ကျင်း ပ သွား မှာ ဖြစ် ပြီး…. နီပေါနိုင်ငံ သမ္မတ ဘီဒီယာဒေဗီဘန်ဒါရီနဲ့ အတူ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့ မြေးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးလည်း တတ်ရောက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်…. ဦး သန့် ဟာ ၁၉၆၇ ခု နှစ် ဧ ပြီ လ က လု …
နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက် သေဆုံး နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက် သေဆုံးသွားသည် … ။ သူ … ဒါကို သတိထားမိတဲ့အချိန် သေမင်းဟုယူဆရသည့် ဝတ်ရုံနက်ခြုံထားသောလူကြီးက သူ့ဘေးရောက်နှင့်နေပြီ။ လက်ထဲမှာလည်း တစ်ဖက်က သူကိုင်နေကျ တူရွှင်းအရှည်ကြီးနှင့်။ နောက္တစ္ဖက္မွာ လက်ဆွဲသေတ္တာလေးတစ်ခုနှင့်။ သေမင်းက .. ထိုမိန်းကလေးကိုပြောသည်၊ “လာ … ကလေးမလေး သွားဖို့ အချိန်တန်ပြီ” မိန်းကလေး – “ဟင် … မြန်လိုက်တာ …သမီးမှာ လုပ်စရာ အစီအစဉ်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်” သေမင်း – “တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အချိန်မရှိတော့လို့ပါ …” မိန်းကလေး – “ဦးလက္ထဲက သေတ္တာထဲမွာ …ဘာတွေထည့်ထားတာလဲ?” သေမင်း – “မင်းနဲ့ …
သချာင်္ပါရဂူဘွဲ့ရမိခင်ကို စံနမူနာယူခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးမှာ ထူးချွန်
သချာင်္ပါရဂူဘွဲ့ရမိခင်ကို စံနမူနာယူခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးမှာ ထူးချွန် မေ လ ၁၂ ရက် နေ့ ဟာ မိ ခင် များ နေ့ ဖြစ် ပါ တယ်။ သ ချာင်္ ဘာ သာ မှာ ပါ ရ ဂူ ဘွဲ့ ရ တဲ့ မိ ခင် ကို အား ကျ စံ န မူ နာ ယူ ပြီး သ ချာင်္ ဘာ သာ ကို ဝါ သ နာ ပါ ဆည်း …
မီးသတ်ရုံးကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ဖုန်းဘေအတင်း ဖြည့်ခိုင်းနေသည့် မိန်းကလေးကို မြောက်ဥက္ကလာပ မီးသတ်ဌာနမှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်….
မီးသတ်ရုံးကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ဖုန်းဘေအတင်း ဖြည့်ခိုင်းနေသည့် မိန်းကလေးကို မြောက်ဥက္ကလာပ မီးသတ်ဌာနမှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်…. မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ရဲ့ အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန် ဖုံးနံပတ်သို့ တောက်လျောက်ခေါ်ဆိုပြီး ဖုံးဘေလ်ဖြည့်ခိုင်းနေသော အမျိုးသမီး၏ လုပ်ရပ်အတွက် မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာပါ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး သတိပေးခဲ့တာကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ် …။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းသို့ ယခုဖော်ပြပါ -(09783682558) ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင် မိန်းကလေးသည် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မီးသတ်စခန်း၏ အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်း နံပါတ် (01 9699378) အားနေ့စဉ်ဖုန်းခဏခဏဆက်သွယ်နေပြီး အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်းဖြစ်၍ အကြောင်းမဲ့ခဏခဏမဆက်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ပြောကြားသော်လည်း ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိပဲ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဖုန်းအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ဆိုကာ ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်အား ဖုန်းဘေဖြည့်ပေးရန်နှင့် မဖြည့်လျှင် အရေးပေါ်ဖုန်းအား ခဏခဏခေါ်ဆိုနေမည်ဟု …
မဆုံးခင် နာရီပိုင်း က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတင်ပြီး ဖေဖေ့အတွက် နောက်ဆုံးစာရေးသား လိုက်တဲ့ သမီး မြတ်စုထွန်းလွင် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း) ဖြစ်တဲ့ ဦးထွန်းလွင်ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ညနေ ပိုင်းမှာ သူချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေ မိသားစုတွေနဲ့ အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးမားတဲ့ သူ့ရဲ့ အလုပ်ကို စွန့်ခွာပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်… အငြိမ်းစားတစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ မိုးလေဝသ သတင်းတွေကို သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေအပေါ် အကျိုးပြုခဲ့တဲ့ တကယ့်ပညာရှင်စစ်စစ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ် ပြည်သူတွေက ယူကျုံးမရ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတာပါ…. ခုလည်းပဲ ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူက လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖေ့ဖေ့အတွက် နောက်ဆုံးစာဆိုပြီး တင်ထားခဲ့တဲ့ …
လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ပြီးနောက် သန်းထီပေါက်ခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင်
လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှ အသက်ရှင် လွတ်မြောက်ပြီးနောက် သန်းထီပေါက်ခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင် အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ ကံဇာတာ ဆက်တိုက်ကောင်းခဲ့ပုံက အံ့သြဖွယ်ရာ ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။ မိုဟာမက် ဘက်ရှီယာ အဗ္ဗဒူလ်ခါဒါ အမည်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အမျိုးသားက အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒူဘိုင်းမြို့မှာ အလုပ် လုပ်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါဒါက ဒူဘိုင်းကနေ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ကာရာလာပြည်နယ်ရှိ Thiruvananthapuram မြို့ကို မိသားစုနဲ့အတူ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေခရီး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ခါဒါဟာ Thiruvananthapuram မြို့မှာ အားလပ်ရက် ခရီးထွက်ပြီးနောက် သြဂုတ်လ ၃ ရက်က ဒူဘိုင်းကို ပြန်လာခဲ့စဉ် ၎င်းလိုက်ပါလာတဲ့ Emirate လေကြောင်းလိုင်းပိုင် EK 521 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်က လေဆိပ်မှာ ဆင်းသက်စဉ် …
ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးနဲ့ ဘဏ်ကို ဓါးပြတိုက်သွားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး
ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးနဲ့ ဘဏ်ကို ဓါးပြတိုက်သွားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဘာကလေးဘဏ်မှာ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးထဲသုံးပြီး ဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို အမျိုးသားက ဘဏ်ထဲဝင်ပြီး ”လက်မြှောက်လိုက်ကြ၊ ဓားပြတိုက်တယ်၊ ပိုက်ဆံ ရှိတာ ထုတ် ” ဆိုပြီး ဓားပြတိုက်ကာ ပိုက်ဆံတွေ ယူဆောင်သွားပြီး သူကိုယ်တိုင်ပဲ အင်္ဂလန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဆီမှာ အဖမ်း ခံပြီး ထောင် ဒဏ် ၁၄ လ ပြစ်ဒဏ်ကိုခံယူခဲ့တာပါ။ အသက် ၅၀ အရွယ် လော်ရန့်စ်ဟာငှက်ပျောသီးကို သေနတ်ပုံဆန် လုပ်ပြီး ဓါးပြတိုက်သွားတာပါ။သူဟာ ပေါင် ၂၀ တန် ပိုက်ဆံတွေ ၁၁၀၀ ဖိုး ယူသွားပြီး ထွက်သွားတော့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေဟာ …
သက်ငယ် မုဒိမ်းကောင်များ ဆေးထိုး၍ သင်းကွပ်စေထောင်ကလွတ်သော်လည်း စောင့်ကြည့်ခံရမယ့် ဥပဒေ ယူကရိန်းတွင် ထုတ်ပြန် နှစ်စဉ် သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု ထောင်ချီဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ယူကရိန်း တရားသူကြီးချုပ်က ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သော အမိန့်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သက်ငယ် မုဒိမ်းကောင်ကိုထောင်ထဲကို မပို့ခင် #လိင်စိတ်လျော့ကျစေတဲ့ဆေး ထိုး၊သင်းကွပ်ပြီး ယောက်ျား မဟုတ် မိန်းမ မဟုတ် ဘဝနဲ့နေစေရမယ်လို့ အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သက်ငယ်မုဒိမ်းကောင်တွေ ထောင်က လွတ်လာရင်လည်းရဲများရဲ့ စောင့်ကြည့်ခြင်းကို တစ်သက်လုံး ခံရပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အာရုံခံ ကရိယာ ထည့်သွင်းထားပြီး အမြဲ ထောက်လှမ်း ခံနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုကို သေဒဏ်ပေးတယ် ဆိုတာ …
ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းဒေသကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် အဖြစ် ကြေညာနိုင်မည်
ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းဒေသကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် အဖြစ် ကြေညာနိုင်မည် ရခိုင်ပြည်နယ် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် မြောက်ဦးဒေသကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ လာမည့် စက်တင်ဘာလမှာ UNESCO ထံသို့ မူကြမ်းတင်သွင်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာတော့ ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ် အဆိုပြုစာတွဲကို အချောသတ်ရေးဆွဲပြီး တင်ပြနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့ မြောက်ဦးဒေသကို ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဒေသအဖြစ် ကြေညာနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ မြောက်ဦးဒေသကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ ဆက်တိုက်လုပ်နေပါတယ်။တော်တော်လေး ခရီးရောက်နေပါပြီ။ ရခိုင်မှာ ပဋိပက္ခတွေ …